Abuur qaabab qaas ah Photoshop adigoo adeegsanaya sawiradaada iyo sawiradaada. | Abuurista khadka tooska ah
Abuur qaababkeenna gaarka ah adoo adeegsanaya sawirro ama sawirro.
La qalab qaabab caado ah waa waxtar badan Samee halabuurkeena si deg deg ah Photoshop iyada oo loo marayo isku-darka foomamka iyo wax-ka-qabashadooda.
Si loo abuuro shaqo tayo sare leh aaladdan, waxay lagama maarmaan noqon doontaa in la helo tiro qaabab ah oo noo oggolaanaya inaan ka abuurno iyaga. Xulashada ugu fiican ee aan nafteenna ugu adeegi karno dariiqooyinka aan u baahan nahay waa in la abuuro, ama sawiro noo gaar ah ama sawirro leh. Mashruucan waxaan ku sharaxeynaa sida loo abuuro qaababkaaga adoo adeegsanaya labada habab.
1 Abuur qaabab qaas ah adoo adeegsanaya sawiradeena
2 Abuur qaabab qaas ah adoo adeegsanaya sawirro
Abuur qaabab qaas ah adoo adeegsanaya sawiradeena
Waxaan ku abuurnay sawirkeena qaabka aan dooneyno, ama qalabka xulashada ama burushka ama labadaba. Kadibna waxaan ka buuxineynaa dheriga rinjiga madow ama, waxaan ka tagnaa oo keliya khadadka, sida tusaalaha. Maskaxda ku hay taas Kaliya waxa aan ku leenahay madow wuxuu noqonayaa qaab oo meelaha banaan ee qaabka ayaa cadaan noqon doona.
Markaan diyaarino naqshadeyntayada, waa inaan dooranaa. Si tan loo sameeyo, waxaan aadeynaa lakabka halka ay ku taalo oo aan ilaalinayno furaha koontaroolka oo aan riixno waxaan gujineynaa lakabka oo lakabka oo dhameystiran ayaa la xushay.
Waxaan qabanaa xakameynta oo guji lakabka si aan uxulno sawirkeena.
Tallaabada xigta waa in loo beddelo sawirka vector. Si tan loo sameeyo, iyada oo sawirka la xushay, waxaan aadeynaa tabka wadiiqooyinka, oo caadi ahaan ku yaalliin daaqadda lakabyada (haddii aynaan furin, dhagsii Daaqada> waddooyinka). Waxaan fureynaa liiska hoos-u-dhaca adigoo gujinaya astaanta geeska kore ee midig oo guji> samee waddada shaqada.
Hadda waxaan aragnaa sida sawirkeennu hadda u noqday vector, waxaad arki kartaa in dhibcaha barroosinka laga sameeyay agagaaraha qaababka sawirkeenna. U beddelashada vector-ka waxay u oggolaaneysaa sawirka in la miisaamo iyada oo aan lumin xallinta.
Ugu dambeyntii, waxaan leenahay u rogo qaab caado ah. Waxaan tagnaa Tafatir> Qeex tab qaab qaabeed, dib ugu magacaw sida aan rabno oo guji OK.
Waxaan horeyba uheysanay qaabka lagu soo daray galeylka qalabka qaababka qaabeynta. Sida aan ku arki karno sawirka, wax isdaba marinta hal qaab wax yar, waxaan abuureynaa mid cusub tanina waxay noo ogolaaneysaa inaan si fudud oo dhaqso leh ku shaqeyno.
Halkan waxaan ku arki karnaa sida sameynta isbeddelo yar yar aan u abuurno naqshad cusub.
Abuur qaabab qaas ah adoo adeegsanaya sawirro
Waxaan doorannaa mid ka mid ah sawiradayada kaas oo ka kooban waxyaabo daneeya naqshadaheena, tusaale ahaan walxaha, geedaha, dhismooyinka, burburka, iwm.
Hadda waa inaan u beddelnaa sawirka madow iyo caddaan.
Marka hore waxaan quusin karnaa sawirka. Waxaan aadeynaa Sawirka> hagaajinta> Hue / saturation waxaan u wareejineynaa qeybta bidixda dhanka bidix, si aan sawirka ugu yeelano culeys.
Kadib si aan ugu bedelno madow iyo caddaan, waxaan aadeynaa tabta Sawirka> Isku hagaajinta> Heerarka waxaanna u wareejineynaa falaarta cad xarunta iyo falaarta cawl iyo tan madow sidoo kale, ilaa aan ka helno muuqaal cawlan oo nadiif ah, laakiin aan lumin qaababka aan jecel nahay.
Hadda waxaan xulnaa (lasoso ama qalab kale oo xul ah) aagga sawirka noo daneynaya inaan abuurno qaabka. Waxaan nuquleynaa xulashada oo waxaan ku dhejineynaa feyl cusub.
Haddii sawirku leeyahay buuq badan waxaan ku baabi'in karnaa miirayaasha, tan waxaan ugu tagi doonaa miirayaasha> shaashadda shaandhada waxaanan isku daynaa midka aan ugu jecel nahay.
Si loo nadiifiyo sawirka wixii grays ah ee harsan, waxaan aadeynaa Xulista> kala duwanaanta midabka oo waxaan ku xulannaa aag madow ama cadaan leh baalasha indhaha. Waxaan siineynaa OK waxayna sameysaa xulasho madow ama cadaan ah, taas oo kuxiran tii aan dooranay, iyadoo la iska indhatirayo cawlka. Riix furayaasha Control + J si aad ugu abuurto lakab xulashada isla markaana aad u tirtirto sawaxanka ku harsan sawirka ama wixii aan dan inoo ahayn.
Ugu dambeyntiina, waxaan raacnaa isla talaabooyinkii aan sameynay si aan uga sameysano qaabab sawiradeena, taasi waa, waxaan doorannaa lakabka, vector ka daaqadaha dariiqyada waxaanna ka abuureynaa qaabka tabta daabacaadda.
Ujeeddadu waa in la helo bangi weyn oo qaabab ah taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan helno ilo dhaqaale si aan u abuurno curintayada. Waxaan ku buuxin karnaa foomamkeena kuwo kale oo badan oo aan ka heli karno shabakada, oo farshaxanada kale ay wadaagaan ama xitaa aan iibsan karno.
Haddii aad rabto inaad aragto tusaalooyinka qaar ee iskudhafka lagu sameeyay qaabab shaqsiyeed, waad raadsan kartaa tusaale ahaan, thumbnails by Nacho Yague, waadna arki kartaa inta aad ku aadi karto adoo adeegsanaya qalabkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Abuur qaababkeenna gaarka ah adoo adeegsanaya sawirro ama sawirro.